मदन अमात्यले बोके कांग्रेस सिध्याउने अन्तरघाती, सभापति नै जिताउने रे ! - Media Dabali
मदन अमात्यले बोके कांग्रेस सिध्याउने अन्तरघाती, सभापति नै जिताउने रे !
लालितपुर - कांग्रेस ललितपुरमा जिल्ला सभापतिका लागि मदनबहादुर अमात्य समूहले ‘अन्तरघाती’ नेता रामकृष्ण चित्रकारलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाएको छ ।
ललितपुरको कुमारीपाटीमा अमात्य समूहले बिहीबार साँझ हतार–हतारमा कार्यक्रम गरेर चित्रकारलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाएको हो । बिगतमा चित्रकार नेता प्रकाशमान सिंह निकटका थिए ।
सिंहले लात हानेपछि घरनघाटको बनेका थिए । चित्रकारले विमलेन्द्र निधिसँग पनि निकटता बनाउन खोजेका छन् । प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा चित्रकारले कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका नेताहरूलाई हराउन अन्तरघात गरेका थिए ।
चित्रकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस पनि भएको थियो । अत्यन्तै चतुर चित्रकारले पछि ललितपुर जिल्ला कार्यसमितिबाट सभापति अमात्यले माफी दिएका थिए ।
किन र कसरी अन्तरघाती नेता चित्रकारले माफी पाए त्यो कुरा सभापति अमात्यलाई मात्रै थाहा होला । अमात्यले आफूलाई सभापति शेरबहादुर देउवा निकटको बताउने गरेका छन् ।
अमात्य समूहबाट सभापतिमा अन्तरघाती नेता चित्रकार छन् । उप–सभापतिमा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र खोमप्रसाद घिमिरे छन् । अमात्यको समूहलाई पूर्व सांसद चन्द्र महर्जन, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनको समर्थन छ ।
ललितपुर कांग्रेसका बहालवाला सभापति अमात्य आफ्नै जिल्लामा कमजोर छन् । अमात्यको अहँकारले गर्दा वडा, पालिका, प्रदेश क्षेत्र र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रहरूमा बढारिएका छन् । अमात्यले आफ्ना आलोचकहरूलाई रुचाउँदैनन् ।
सोही कारण ललितपुरमा रहेका देउवा समूहका दीग्गज नेताहरूलाई छलेर विमलेन्द्र निधि निकट हुन खोजेका अन्तरघाती नेता रामकृष्ण ताम्राकारलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाएका छन् ।
ललितपुर कांग्रेसमा अमात्यका सबै उम्मेदवारको लज्जास्पद हार, राणा समूहले देखायो कमाल !
शनिवार, मंसिर ४ २०७८०१:२२:२३
# मदन अमात्य